Haweeneey Wacdaro Kamuujisay Lanoolaanshaha Ninkeeda (Qiso Cajiib Ah).? - iftineducation.com
Walaalayaal, inta aanan bilaabin qisadaan haweeneydaan, waxaan rabay inaa cabiro dareenkeeyga sida uu noqday markii aan aqriyey qisadaan kadib. Walaahi ilaaheybaan ku dhaartee aad iyo aad bey ii cajiib galisay qisadaan markii aan aqriyey kadib ilaa aan ku dhawaadayba inaan ilmeeyo. Waana taasi tan igu kaliftay inaan idiin soo gudbiyo adinkana si aad iila wadaagtaan qisadaan yaabka leh ee ka turjumeysaa hawaaney fahantay qiimaha ninkeeda.
Qisadii oo faah-faahsan
Waxaa uu yiri sheikh la yiraahdo SH. Abu Isxaaq alxuweynii oo Culimada Reer masar ah, kana mida Culimada hadda wali nool waqti xaadirkan. Waxaa uu yiri sheikha “waxaan booqasho ugu tegay nin asxaabteyda kamida. Markii aan booqday ayaan u tegay isagoo murugeeysan, markii aan weeydiiyey sababka uu u murugeysanyahayne waaba uu ooyey ooyin aad iyo aad u daran, ka dibne waxaa uu yiri “haweeneeydiibaa iga jiran ane waan kor joogay mudo badan”.
Sh. Abu Isaxaaq oo sheekadii sii wato waxaa uu yiri waan layaabay ninkaan iyo ooyintiisa ilaa aan umaleeyeba ineey ku sugantahay ninkaan liidnaanu misne hadii aan sii fiiriyey ninkaan xaalkiisa wuxuu ahaa nin aan wanaag ku aqiinay. Xataa hadii aan sii fiiriyey Xanuunka haweeneydiisa hayeyna saas uma sii darneyn. Markii uu xoogaa ooyintiisii kasoo baraarugay ayuu yiri “miyaad la yaabantahay inaan la ooyey xanuunka xaaskeyga ooyinta nuucaan oo kale ah?.
Hadaad ogaan leheeyd inta aan ka ogahay waad ii cudur daarin laheyd imana canaanateen ee iga dhegeeyso Shiikh Sheekadii”. Kabacdi wuxuu bilaabay inuu ka sheekeeyo wanaaga xaaskiisa wuxuunu yiri “waxaan ahaay nin faqiir ah ee kashaqeeysto shaqo aan KuDabarto nolosheeyda oo qura. Kabacdi waxaa ilaahey qadaray inuu ila kulansiiyey nin taajir ah ee doonayey inuu ii guuriyo gabadhiisa waxa uu igu arkay wanaag, amaano iyo alle kacabsi darteed ah. Kadib waxaa saas ku dhacay Nikaaxeenii gabadhiisina waxeey noqotay haween tan ugu wanaagsan ee walibana saalixad ah. Waxaaney ka dhigtay nolosheeydii oo dhanba janadii oo aduunka la’ii keenay waxaana kuwada nooleen nolol iska hooseyso xaga maadi ahaan.
Laakiin aad iyo aad u sareyso xagga macnawiyan ahaan. Kadib waxaa dhacday in gabadha aabeheed maalin maalmaha kamid ah ii yimid ee igu yiri; war hebeloow! “ilaahey ka cabso oo waxaad usoo iibisaa xaaskaaga waxyaabaha sida kimista, jiiska, fuul iyo falaafil –waa cunooyin dhulka masar laga cuno- hana ku badin cuntooyinka sida hilibka, subaga, qudaarta iyo wixii lamida. Waxaa uu yiri ninkii “afka ayaan furtay yaab dardiis, mana aanan garan waxaan ugu jawaabo, mana aanan fahmin waxa uu ileeyahay iyo wuxuu kawado hadalkiisa toone. ilaa aan xaaskeygii u tegay ee aan weydiiyey arinkaasi.
Sheekadaan qeybtii ugu cajiibka badneyd
Laga bilaabo halkan waa qeybtii qisadaan ugu yaabka badneyd. Bal ila aqriya walaalayaal gabadhaan jawaabta ay ka bixisay arinkaasi.
Waxaa ay tiri “markasta ee aan tago guriga reer aabehey waxaa la’ii keenaa hilib duban, faakiha iyo cuntooyin kala nooc-nooc ah. Kadibne waan iska diidaa waxaana iraahdaa ma doonayo! Waan kadaalay cuntooyinkaan iyadoo arinkaasi kawado inaaney helin oo ay kadaashay laakiin iyaga waxey u qaateen iney cunidiisa kadaashay. Beena maaha arintaasi oo waxeey isticmaashay waxa loo yaqaano carabiga “Attawriyah” waana hadal sarbeeb ah amaba maldahan hadba sidaad u taqaano.
Si kastaba arintu ha’ ahaatee; gabadhaan saalixada ahi waxey kuleheed reerkeeda marwaliba oo ay waxyaabahaan u keenaan madoonayo oo waan kadaalay iyadoo arintaasi laba shayba uga gol laheyd. Waa tan koobaade inaaney caloosheeda iska barin waxaan u sii socon doonin ee baritoole ka carqaladeeyn doono nolosheedii caadiga aheyd. Waa tan labaade, in ay ninkeeda mustawihiisa kor u qaado una tusiso reerkeeda in ninkeedu wax waliba oo ay dooneyso u diyaariyo waana sida laga doonayo haweeney kastoo xilkas ah.
Iyadoo walibana xaqiiqadu ay tahay inaan gurigeeda lagaba cunin lagana aqoonin cunooyinka nuucaana ee lagaba yaabo in bishii ama labadii biloodba mar ay soo marto iney hesho waxyaabahaan, ayaa hadana wexey dhihi jirtay waxaad ii keentaa wax yaabo aan ku dhadhanaansado sida jubno dhanaan ah iyo falaafil iyo wixii lamida!!!!.
Alla maxaa wanaag badiyey haweenwydaan!!!!
Haweeneydaan -saalixada ah ee dooneysay iney kuweeyneyso ninkeeda reerkeeda agtooda- hadana ma aheyn ninkeedu mid dabooli karo baahideeda iyo tiisa toone, isla mar ahaantaasne raali bey ku noqotay iney kula noolaato ninkeeda noloshaasi iyada ah, waliba intaasi raali kuma noqone waxey u muujisay reerkeeda hodontinimo iyo iney ka hesho ninkeeda wax waliba oo ay dooneeyso.
Walaahi waxaan rajeynaa in gabadhaasi ay ku dhaboowdo hadalka rasuulkeena SCW ee ahaay “hodontinimadu ma’aha mida xoolaha, laakiinse hodontinimadu waa mida qalbiga” Waayoo waxey u dul qaadatay gaajo iyo wax yari kulana sabartay ninkeeda iyadoo waliba ka dhalatay reer ladan hadana isla mar ahaantaasina xasuusan balan qaadka alle ee ahaa inaanuusan dayaceeynin kuwa sabro aduun iyo aakhiraba. Waxey ku garab istaagtay Zawjkeeda xaaladkastaba culeeys iyo fudeeyd intaba waxeeyna ku raali noqotay nolosha dhabta ahi ee ninkeeda. Ayada oo kacalool goosatay nolosha wax badan oo dumarka asaageeda ahi isku maaweeliyaan taas oo ah aniga waxaan ahay gabar ka dhalatay reer qurac iyo reer qansax oo taajiriin ah.
Kuwa noocaasi ahina waxeey iloobeen maah-maahdii somaalida ee oraneysay “Aabeheybaa geel lahaan jiray waxaa ka roon dameerkaan baan leeyahay” waxeyna ogaatay nolosha dhabta ahi iney tahay mida ninkeedu ku suganyahay ee aaney aheyn mida reerkeedu ku suganyihiin.
Kadib markii uu sheekadii dhameystiray ninkii ayaa wuxuu ku yiri sheekhoow “hadda ma ogaatay sababkii ooyinteydii iyo cabsida aan kabaqayey Waayo waxaan diidayaa iney nolosheydii firaaqeyso haweeneydaan??? Waliba wuxuu sii raacsiiyey “intani waa in yar oo wanaageeda kamida ee hadii aan kaaga sheekeyn lahaa wanaagyadeeda kale sida soonkeeda, salaadeeda, Alle kacabsigeeda, Akhlaaq wanaageeda oo ay kula dhaqanto aniga iyo dadka kaleba Ma’aan gudeen xaqeeda markii loo bar-bar dhigo- ooyintan aan u ooynayo!!!!!!!!!
Sheikh Abuu Isxaaq markii uu intaasi maqlay ayuu madaxiisa hoos u raariciyey waana uu iska laabtay isagoo u duceynayo duco kal iyo laab ah. Anguna waan u duceyneynaa haweeneydaan waxaanan leynahay ilaahey ha ku xifdiyo aduun iyo aakhiraba sidaad u xifdisay ninkaada.
Gabdhaha muslimaadka ah ee soomaaliyeedna waxaan kula dar-daarmayaa iney ku daysadaan nolosha gabadhaan wax badana ka bedelaan noloshooda. Sidoo kale raguna waa iney qaataan mawqifka ninkeeda oo kale oo loo garto gabdhaha xaqooda iyo kifaaxa ay lasoo maraan ragooda.
FG: Walaalayaal Qisadaan waxey horo dhac u tahay qisooyin taxanaa oo daba socdo qisadaan ee aan ugu magac darnay “Dumar wacdaro ka muujiyey wanaajinta ragooda” inagoo ragana ku xijin doono inshaa allah.
Fanaanada Shukri Sindiko oo la soo shaac baxday qaab cusub iyo dar dar ay la soo gashay fanka soona saaraty heeso cusub(Daawo)